Ndụmọdụ maka ngwa ngwa dị ọcha ma dị ọcha na Windows | Akụkọ akụrụngwa
Have nwere mmalite ma ọ bụ buut nsogbu na Windows? Typedị ọnọdụ a nwere ike ime ọtụtụ mmadụ, nke gụnyere ọ bụghị naanị nwayọ nwayọ nke sistemụ arụmọrụ na-agba ọsọ, kamakwa njehie ole na ole nwere ike ịpụta n'enweghị ihe kpatara ya, yana oge opekata mpe.
Dị ka ihe atụ, ahụkarị «acha anụnụ anụnụ»Ọ bụ otu n'ime ihe mgbaàmà kachasị iwe nke ọtụtụ ndị ọrụ Windows ga-emeso, ha kwesịrị ịnwa idozi nsogbu a site na ịbanye na«ọnọdụ ọdịda«. Ọ bụrụ na ị rụọ ụdị ọrụ a n'oge ụfọdụ, ị ga-amata nke ahụ sistemụ arụmọrụ malitere ngwa ngwa karịa ot. Nke a bụ echiche anyị ga-anakwere ugbu a, ya bụ, na anyị ga-anwa iji ụkpụrụ a wee rụọ ọrụ ka sistemụ arụmọrụ anyị jiri ọsọ ọsọ karịa ọsọ ọsọ.
1 Anyị enwere ike ịmalite Windows na "ọnọdụ nchekwa"?
2 Gbanyụọ ọrụ nbanye na Windows
3 Gbanyụọ ngwa na obere iji na Windows
4 Gbanyụọ atụmatụ mmalite ndokwa na Windows
Anyị enwere ike ịmalite Windows na "ọnọdụ nchekwa"?
N'ezie ọ bụ, ọ bụrụhaala na sistemụ arụmọrụ anyị na-eweta ụdị nsogbu ma ọ bụ nsogbu; Na nwute, nke a "modesafe mode" na-abịa gbanyụọ atụmatụ sistemụ dị mkpa, nke ga-egbochi ihe ole na ole na ngwa ọrụ anyị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị ịgba ọsọ. Ya mere, anyị enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ a mana, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnwe ụkpụrụ ya mgbe Windows malitere n'ụzọ nkịtị ma ọ bụrụ na anyị ejiri aghụghọ ole na ole.
Gbanyụọ ọrụ nbanye na Windows
N'ọtụtụ oge, anyị ekwuola ụdị ọrụ a na ụzọ ndị ọzọ gbasie mmalite Windows, ọ bụ ezie na ugbu a, anyị ga-egosi aghụghọ ole na ole ndị ọzọ ị nwere ike iji ka mmalite nke sistemụ arụmọrụ dị nnọọ ka ihe ị nwere ike ịchọta, ya na «ọnọdụ nchekwa». Na nke mbu, ikwesiri kpọọ "msconfig" na ot ụzọ (ịdabere na Win + R keyboard ụzọ mkpirisi).
Ozugbo inwere windo nke ngwa oru a, ị ghaghi iga na oru “aka”; emesia i gha eme ka igbe di na ala aka ekpe rue - zoo ọrụ nke Microsoft, n'ihi na site na nke a ị gaghị ewepu ọrụ ole na ole dị mkpa na sistemụ arụmọrụ. N'ikpeazụ, naanị ị ga-pịa bọtịnụ ahụ kwuru "Deactivate All" na ala aka nri wee malitegharịa kọmputa gị.
Gbanyụọ ngwa na obere iji na Windows
N'otu windo a anyị nọ n'oge a, ịnwere ike iji ọrụ ọzọ; Enwere ike ime nke a ma ọ bụrụ na ị gaa taabụ na-esote, ya bụ, nke nwere aha "Windows Start".
Ozugbo ahụ, ị ​​ga-amalite ịchọ ndepụta niile maka ngwa ndị ahụ ị tụlere "ejibeghi"; N'okwu a, ịnweghị ike ịkwụsị ha niile n'ihi na ebe a, enweghị igbe na-eme ka ndị dị nnukwu mkpa na-agba ọsọ dịka anyị kwurula na ngwụcha gara aga. Naanị ị ga-ahọrọ nke ọ bụla ngwa na igbe nke ọ bụla nke mere na ịmalite ya ga-akwụsị kpamkpam, pịa bọtịnụ «Tee».
Gbanyụọ atụmatụ mmalite ndokwa na Windows
Nhọrọ a nwere ike ime site na ndị na-ewere onwe ha ntakịrị ndị ọkachamara Windows ọkachamara; Nke a bụ n'ihi na anyị ga-achọ ịma ihe ọrụ ma ọ bụ Ọrụ ndị Windows na-agba ọsọ na nhazi oge, ihe anyị enweghị ike ịmata nke ọma, ọ bụ ezie na ụfọdụ nghọta nwere ike iburu anyị.
Dị ka na mbụ, lee, anyị ga - akpọ ọrụ aha ya bụ «Njikwa Schedtasks«, Nke anyị ga-ede ya mgbe iji keyboard ụzọ mkpirisi« Win + R »; Site na nke a, windo ga-apụta na-akpaghị aka ebe ọrụ niile nke Windows na-arụ na usoro ndabere dị. Naanị anyị ga-ahọrọ nke ọ bụla n'ime ha site na iji bọtịnụ ziri ezi nke òké ma gbanyụọ ya site na nhọrọ menu ihe omume.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Usoro: Otu esi enweta Windows boot dị ọcha
3 Ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji gbanwee ederede sitere na weebụ gaa na dọkụmentị PDF